Soo dejisan MiniTool Power Data Recovery 8.8 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaMiniTool Power Data Recovery
Bogga rasmiga ah: MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery – fudud ah si ay u isticmaalaan software rayshada xogta. software The awood inuu ka soo kabsado tirtiray, oo burburay ama files iyo maqaal qoruhu disk oo failure waxaa keena saamaynta arrimo kala duwan oo laga badiyay. MiniTool Power Data Recovery taageertaa tiro badan oo ah drives adag iyo nidaamka file ka mid ah noocyada kala duwan. Sidoo kale software kuu ogolaanayaa inaad si loo soo celiyo data ku saabsan kaararka xusuusta, drives indhaha, qalabka dijitaalka ah iyo sidayaal kale macluumaadka. MiniTool Power Data Recovery leeyahay interface a fudud oo dareen leh.
Celisay files iyo maqaal qoruhu disk
hababka kala duwan scann
kabashada Data ku sidayaal macluumaad kaladuwan
interface An dareen leh
Soo dejisan MiniTool Power Data Recovery
Faallo ku saabsan MiniTool Power Data Recovery
MiniTool Power Data Recovery Xirfadaha la xiriira
Software wuxuu abuuraa shaashadaha, oo leh qalab si fudud loo isticmaalo qalabka lagu xiro qoraalada si sawirada ama sawirrada.